Kitra – «Amboaran’ny Caf 2017» : misy Breziliana ao amin’i Angola hifandona amin’ny Cnaps | NewsMada
Kitra – «Amboaran’ny Caf 2017» : misy Breziliana ao amin’i Angola hifandona amin’ny Cnaps
Hifanandrina amin’ny ekipan’i Angola ny Cnaps Sport, eo amin’ny “tour de cadrage”, amin’ny fiadiana ny amboaran’ny kaonfederasiona. Ekipa tsy fantatra loatra, saingy misy mpilalao breziliana ao aminy.
Tontosa, omaly, tatsy Le Caire, Egypta, ny antsapaka eo amin’ny lalao ampaha-16-n-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’ny kaonfederasiona, taranja baolina kitra, ka andraisan’ireo ekipa 16 nihintsana avy any amin’ny “Ligue des champions” anjara. Anisan’izany ny Cnaps Sport izay hifanandrina amin’ny Recreativo do Libolo, tompon’ny amboaran’i Angola.
Eto Madagasikara ny lalao mandroso, ny 7 na 8 na 9 avrily ho avy izao. Any Luanda ny fihaonana miverina, afaka herinandro. Ekipa tsy fantatra loatra teo amin’ny fifaninanana afrikanina ity klioban’ny Recreativo do Libolo ity.
Na izany aza, klioba anisan’ny manankarena any Angola ny Recreativo do Libolo satria manazatra azy ilay Portiogey, Carlos Vaz Pinto. Ankoatra izay, misy mpilalao efatra mirahalahy mandrafitra ny Recreativo do Libolo. Anisan’izany i Ricardo, mpiandry tsatoby, izay teratany portiogey. Eo koa ilay brezilianina, Fabricio, lohalaharana mpamono baolina, ary ilay Cap-Veridianina, Sidnei, sy ilay Kongoley, Kaya, mitana ny toeran’ny irakiraka.
Raha ny dingana vitany aloha, teo amin’ny fifaninanana afrikanina, tafiditra tao amin’ny lalaom-bondrona, ny taona 2013, teo amin’ny “Ligue des champions” ary nihintsana teo amin’ny dingan’ny ampaha-16-n-dalana kosa nandritra ny amboaran’ny kaonfederasiona, ny taona 2009. Indroa efa nandrombaka ny “super coupe”-n’i Angola : ny tamin’ny taona 2015 sy 2016.
Mila miomana tsara, araka izany, ny Cnaps Sport satria mety efa manao baolina eoropeanina, ity ekipa hifanandrina aminy ity, fa tsy toy ny lalaon’ny ekipa afrikanina, efa fahita hatramin’izay. Mbola misy rahateo ny fotoana ho an’i Typeh, hanitsiana ireo lesoka sy ny tsy nety, nandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika farany teo.